Ebe nkiri ọhụrụ na ọdụ ụgbọ elu Frankfurt: Fraitor Visitor Center ga -emepe n'August 2
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airport » Ebe nkiri ọhụrụ na ọdụ ụgbọ elu Frankfurt: Fraitor Visitor Center ga -emepe n'August 2
Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • omenala • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
“Globe” bụ ihe ngosi teknụzụ kachasị ama na Visitor Center. Mgbidi LCD a na -emekọrịta ihe na -ahụ anya ụgbọ elu niile na -arụ ọrụ gburugburu ụwa ozugbo.
Ọbịbịa ọhụrụ na -emepe na Ọgọst 2 n'ọdụ ụgbọ elu Frankfurt: ụlọ ọrụ mgbasa ozi Fraport Visitor na Terminal 1, Hall C, ga -anabata ndị ọbịa mbụ ya naanị n'oge oge njem oge ọkọchị.
Ihe ngosi ihe ngosi ya dị iche iche na-enye ndị ọbịa nke afọ niile ohere ịhụ ụwa na-adọrọ mmasị nke ụgbọ elu.
Ihe dị ka ihe ngosi 30 na mmekọrịta ọhụrụ na -enye ohere iji nweta nnukwu ọdụ ụgbọ elu Germany n'ụzọ ọhụrụ.
N'elu oghere dị otu puku na narị abụọ na narị abụọ, ihe ngosi ahụ na -enye nkọwa dị egwu n'azụ ihe nkiri n'ọdụ ụgbọ elu Frankfurt na nke ụgbọ elu n'ozuzu ya.
Ọ bụghị naanị ndị ọbịa na-amụta maka ọrụ ụgbọ elu na-arụ kwa ụbọchị; ha nwekwara ohere inyocha akụkọ ihe mere eme ya, chọpụta teknụzụ ụgbọ elu, ma tụlee ọdịnihu ụgbọ elu.
Ihe ngosi a na -akpọ ndị ọbịa ka ha na -emekọrịta ihe ma mikpuo onwe ha. N'ime otu egwuregwu, ndị ọbịa na -anwale nkà ha nke ijikọ ọnụ site na iduzi Airbus A320neo ebe ọ na -adọba ụgbọala. Ihe ọzọ pụtara ìhè bụ ịnya ụgbọ ala dị adị n'ezie site na sistemụ njikwa akpa ọdụ ụgbọ elu. Onye isi ụlọ ọrụ Fraport, Dr. Stefan Schulte kwuru, sị: “Ebe nlegharị anya nke ọtụtụ mgbasa ozi na-enye ndị mmadụ ohere ịghọta nke ọma ma jiri aka ha hụ ụwa ọdụ ụgbọ elu dị iche iche na nke dị mgbagwoju anya. Ọbịbịa ọhụrụ ahụ ga-abụkwa isi ihe iji wusie mkparịta ụka ogologo oge ike na ndị obodo anyị na ndị ọbịa sitere n'akụkụ ndị ọzọ nke Germany na ụwa. ”
“Globe” bụ ihe ngosi teknụzụ kachasị ama na Visitor Center. Mgbidi LCD a na -emekọrịta ihe na -ahụ anya ụgbọ elu niile na -arụ ọrụ gburugburu ụwa ozugbo. Ọ nwere ngosipụta 28 n'otu n'otu, jikọtara ya iji mepụta otu ihuenyo gbasara ihe dị ka square mita 25. Usoro ahụ pụrụ iche n'ezie: ọ nweghị ebe ọzọ nwere ike igosi ọtụtụ puku mmegharị ụgbọ elu n'ụzọ zuru oke. A na -enye data ụgbọ elu maka Globe site na FlightAware, ikpo okwu nsuso ụgbọ elu US. Ndị mmekọ Fraport na FlightAware hazie data achọrọ maka arụmọrụ na ọdụ ụgbọ elu Frankfurt. Karịsịa, data nke FlightAware nyere na -enye ohere ịhazi atụmatụ ọdụ ụgbọ elu nke ọma.
Ihe nlereanya dị square mita 55 nke ọdụ ụgbọ elu obodo (n'ọtụtụ 1: 750) na-akpọ ndị ọbịa ka ha banye njem nlegharị anya nke nchọpụta.
Emechara Fraitor Visitor Center na ọdịda 2020, na -esote afọ abụọ nke owuwu, na ọnụ ahịa ihe dịka nde euro 5.7. “Anyị kwesịrị eyigharị oghere ya ọtụtụ oge n'ihi ọrịa na -efe efe. Ya mere enwere m obi ụtọ karịa ugbu a ikpughere ebe nlegharị anya ọhụụ na ọdụ ụgbọ elu Frankfurt. Ebe etiti ahụ na -eme ka ọ pụta ìhè na ụwa na -adọrọ mmasị nke ndụ ọdụ ụgbọ elu, ”ka Anke Giesen, onye otu onye isi ụlọ ọrụ Fraport na Onye isi oche nke Retail na Real Estate.
A ga -azụrụ tiketi na etiti n'etiti ntanetị tupu oge eruo www.fra-tours.com/en . Achọrọ nkwenye akwụkwọ maka inweta nnabata. Ugbu a, tiketi adịghị na ọdụ ụgbọ elu n'onwe ya.
Ogige ndị ọbịa Fraport ga -emeghe kwa ụbọchị site na elekere 11 nke ụtụtụ ruo elekere asaa nke abalị. Ọnụ ego ntinye maka ndị okenye bụ euro iri na abụọ. Ọnụ ego dị ala nke euro 7 dị maka ndị ọbịa tozuru oke nwere ID dabara. Ụmụaka nọ n'okpuru afọ anọ na -abanye n'efu. N'oge ezumike ụlọ akwụkwọ mpaghara ugbu a, na -agwụ na Ọgọst 12, ndị ọbịa ga -enwe ike ịdọba ụgbọ ala otu awa n'ego ụgbọ elu ọha nke ọdụ ụgbọ elu; a ga -ewetarịrị mpempe akwụkwọ ị na -adọba ụgbọala na tebụl nnabata ndị ọbịa maka nkwado.
Enwekwara ike ịdebe ebe ndị ọbịa Fraport dị ka ebe pụrụ iche maka mmemme. A kwadebere ya na teknụzụ ngosi ọhụụ, yana panorama ọdụ ụgbọ elu nke na-eme ka ọ bụrụ ezigbo ọnọdụ maka mbido ngwaahịa, nnọkọ akụkọ na nnọkọ ọdịda anyanwụ.